WordPress Blog - Page3of 110 - Just another WordPress site
တောင်သူတွေ အလိုရှိနေကြတဲ့ မိုးတွေလာတော့မယ် လို့ပြောလိုက်တဲ့ စုစုစံ
တောင်သူတွေ အလိုရှိနေကြတဲ့ မိုးတွေလာတော့မယ် လို့ပြောလိုက်တဲ့ စုစုစံ တောင်သူတွေ မိုးအလို ရှိနေကြတဲ့ မကွေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသတွေမှာ ၂၀၂၂ ဇူလိုင် လ ၁ ရက်နေ့ မှ ၃ ရက်နေ့ အ တွင်း မိုးတွေ ရွာလာ ပါလိမ့်မယ် စစ်ကိုင်း တိုင်းအောက် ပိုင်း မုံရွာ ခရိုင် ရွှေဘို ခရိုင်ကန့် ဘလူခရိုင် ကလေး ခရိုင်ဒေသတွေ မှာ မိုးကြီးနိုင် သဖြင့် နွေစပါး ရိတ်သိမ်းကြ မည့် သူများ သတိထား ဖွယ်ရာဖြစ် ပါတယ် ISSUED TIME 26/06/2022 AT 8:35AM(MMT) Su Su San မင်း ဂွတ် […]
သူတို့ ဇနီးမောင်နှံအပေါ် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ကိစ္စကို အန်တီဖူး ဒဲ့ရှင်းလိုက်ပါပြီ…
သူတို့ ဇနီးမောင်နှံအပေါ် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ကိစ္စကို အန်တီဖူး ဒဲ့ရှင်းလိုက်ပါပြီ… ယနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောအများဆုံး ကိစ္စကတော့ အသက် ၇၀ နဲ့ ၂၇ နှစ် ဇနီးမောင်နှံ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မလိုမုန်းထားပြောသူတွေရော၊ အံ့ဩချီးကျူးကြသူတွေရောနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တချို့ကလည်း ငွေမက်တယ်လို့ ပြောကြသလို တချို့ကလည်း ရေစက်ရှိလို့သာ ဒီလို အသက်အရွယ် ကွာဟပေမယ့်နှစ်ယောက်သား ချစ်ကြည်နူးနိုင်တာလို့လည်း ပြောနေကြပါတယ်။ အန်တီဖူးရဲ့ ပေ့ဖြစ်တဲ့ ဖူးစံအိမ် ပေ့မှာတော့ ဒီလိုတင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ “မှန်တာဝန်ခံရရင် သူ့မှာ ကျမအရင်တွဲတဲ့ မိန်းမတွေ အများကြီးရှိတယ်လေ။ ကျမနဲ့ တရားဝင်ယူလိုက်တာ သူ့ပတ်သက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ သိအောင် ခုလိုတွေ တင်မိတာပါရှင်။ သူလဲ အခုကျမကို ယူပြီး ပိုင်းလုံးလို့ […]
လှိုင်သာယာကျောင်းက သူငယ်တန်းကလေးငယ်တဦးရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ် (ဘယ်သူ တာဝန်ခံမှာလဲ)
လှိုင်သာယာကျောင်းက သူငယ်တန်းကလေးငယ်တဦးရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ် (ဘယ်သူ တာဝန်ခံမှာလဲ) လိူင်သာယာမြို့နယ် အ.ထ.က ၁၀ ကျောင်းမှာ KG သူငယ်တန်း ကလေး (မိန်းကလေး) တစ်ယောက် အိမ်သာထဲ ပိတ်မိပြီး သေဆုံး သွားတာကို ကျောင်းရဲ့ ပုံရိပ် ကျမှာစိုးလို့ ဆိုပြီး သတင်း ဖုံးထားတယ်။ လူတစ်ယောက်သေတာ အထူးသဖြင့် KG သူငယ်တန်း ကလေး တစ်ယောက် သေဆုံးတာပါ။မသေဆုံးခင် ကလေး ဘယ်လောက်ကြောက်နေ လိုက်မလဲ။ ဆရာ၊ဆရာမဆိုတာ KG သူငယ်တန်းကလေး အိမ်သာ သွားပြီဆို အခြားကလေးတွေထက် ပိုပြီး အရမ်း သတိ ထားရတယ်။ ဘယ်အချိန်သွားတယ်။ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီ ဆိုတာ မျက်ခြေ မပြတ်ရဘူး။KG သူငယ်တန်း ဆိုတာ ဘာမှ မသိတဲ့ အရွယ်တွေ၊ပြဿနာ ဖြစ်လာရင် […]
၄ တန်းကျောင်းသူဘဝကထဲက စင်ကာပူမှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာပါ ဆက်တက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဉီးထွန်းလွင်ရဲ့ သမီးလေး
၄ တန်းကျောင်းသူဘဝကထဲက စင်ကာပူမှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာပါ ဆက်တက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဉီးထွန်းလွင်ရဲ့ သမီးလေး မိုးနတ်မင်းကြီးရဲ့ သမီးလေး ၄ တန်းကျောင်းသူဘဝကထဲက စင်ကာပူ မှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အမေရိကန် တက္ကသိုလ်မှာပါ ဆက်တက်ခွင့်ရခဲ့ ဒီလောက်စွမ်းရည်ရှိတဲ့ မြန်မာသမီးငယ်လေး တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရ သိရတာ နိုင်ငံအတွက် အားရှိလိုက်တာ ဒီလိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သားငယ် သမီးငယ်တွေ အများကြီးပေါ်ထွန်းပါစေ… အဲဒီစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သမီးငယ်လေးနံမည်က “စွမ်းရည်“တဲ့ မြန်မာပြည်က ၄ တန်းကျောင်းသူ “စွမ်း”…. စင်္ကာပူကို မိခင်နဲ့ အတူ လာလည်ရင်း …. ခဏတည်းတဲ့ အိမ်က အိမ်ရှင်ကလေးလေးတွေနေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက အစိုးရကျောင်းမှာ primary(4) ( Grade 4) အတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးဝင်ဖြေကြည့်ရာ သူ့အဖြေတွေကို အဲဒီကျောင်းက သဘောကျပြီး တစ်တန်းကျော်ကာ primary (5) […]
တောင်သူတွေအတွက် ဇူလိုင်မိုး ပြောင်းစိုက်ပျိုးကြ မယ့်တောင်သူတွေအတွက် ဇူလိုင်လ ပထမပတ် အတွင်း မိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ ဒေသတွေ အတွက် မိုးလေဝသ ဆရာမလေးစုစုစံက ကြိုတင် ခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ပေးထားပါ တယ် ။ မိုးလေဝသ ဆရာမလေး စုစုစံရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် အရ ၂၀၂၂ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၃ ရက်နေ့အတွင်း တောင်သူတွေ အလိုရှိနေကြ တဲ့မိုးတွေအဖြစ် မကွေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသတွေမှာ မိုးတွေရွာလာ ပါလိမ့် မယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း မုံရွာခရိုင် ရွှေဘိုခရိုင်ကန့် ဘလူခရိုင် ကလေး ခရိုင်ဒေသတွေ မှာတော့ မိုးကြီးနိုင် သဖြင့် နွေစပါး ရိတ်သိမ်းကြမည့်သူများ သတိထား ဖွယ်ရာဖြစ် တယ်လို့ အသိပေး ထုတ်ပြန်ပေး ထားပါတယ်။ […]
(၂၃)နှစ် ပဲရှိသေးတဲ့ သမီးလေး ကိုယ်ဝန် ရှိနေလို့ ကောင်လေးကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ခိုင်း လိုက်တဲ့ အခါ…
(၂၃)နှစ် ပဲရှိသေးတဲ့ သမီးလေး ကိုယ်ဝန် ရှိနေလို့ ကောင်လေးကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ခိုင်း လိုက်တဲ့ အခါ… သမီးလေးက အသက်မှ ၂၃ နှစ်ရှိသေး ကိုယ်ဝန် ရလာတယ်။ အမေလုပ်သူ ဒေါသအကြီးကြီး ထွက်ရပြီ။ “ကောင်မ အဲ့ဒါ ဘယ်နွား လက်ချက်လဲ အခု ဖုန်းဆက်စမ်း အဲ့ကောင်ကို” ကောင်မလေး ဖုန်းဆက်တယ်။ နာရီဝက်လောက် ကြာတော့သူတို့ အိမ်ရှေ့ကို Rolls-Royce တစ်စီးဆိုက် လာတယ်။ သားသား နားနား ဝတ်စားထားတဲ့ အသက်ကြီးကြီး လူတစ်ယောက် ကားပေါ်က ဆင်းလာတယ်။သူ ပြောတယ်။ “မရည်ရွယ်ပဲ ကိုယ်ဝန် ရသွားတာ စိတ်မေ ကာင်းပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျနော် သူ့ကို လက်ထပ်ဖို့  လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့် သူ […]
တင်းတိပ် အတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ဆန်မှုန့် မျက်နှာဖုံးပြု လုပ်နည်း…
တင်းတိပ် အတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ဆန်မှုန့် မျက်နှာဖုံးပြု လုပ်နည်း… တင်းတိပ် အတွက် အထူးကောင်း မွန်တဲ့ ဆန်မှုန့် မျက်နှာဖုံး တင်းတိပ်ကြောင့် စိတ်ညစ်နေပါက အမဲစက်၊ အမဲကွက် တွေကို သိသိသာသာ သက်သာစေ နိုင်တဲ့ ဆန်မှုန့် မျက်နှာဖုံးလေးနဲ့ ကုသပေး နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်း လမ်းလေးက အာရှ အသားအရေ အတွက်လည်း အထူး သင့်တော် ပါတယ်။ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်၊ နေလောင်၊ အမဲစက်၊ အမာရွတ် အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်တဲ့ ဆန်မှုန့် မျက်နှာ ဖုံပြုလုပ်နည်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကတော့ ဆန်မှုန့် ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း၊ ဒိန်ချဉ် ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း၊ […]
(၃)ည လိမ်းအိပ်ပါ သုံးရက်မြောက်နေ့မှာ မင်းသမီးလေး တစ်ပါးရဲ့ အသားအေ ရပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်
(၃)ည လိမ်းအိပ်ပါ သုံးရက်မြောက်နေ့မှာ မင်းသမီးလေး တစ်ပါးရဲ့ အသားအေ ရပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ် ဒီတစ်ခေါက် မှာတော့ သုံးည လိမ်းရုံနဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်ပါးလို တောက်ပတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြ ချင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Vitamin E ကို အဓိက သုံးပြီး အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတာပါ။ မိတ်ကပ် လိမ်းစရာ မလိုဘဲ သဘာဝ အလှကို အားလုံး လိုချင်ကြမှာပါ။ မင်းသမီးလေးရဲ့ အသားအေ ရမျိုး လိုချင်နေသူ ကောင်မလေးတွေအတွက် နည်းလမ်းလေး ကတော့ ဒီလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့… ရှားစောင်းလတ်ပတ်ဂျယ် နှင်းဆီရေ ဗာဒီစေ့အဆီ သို့ သံလွင်ဆီ ဗီတာမင် အီး သန့်ရှင်းတဲ့ ခွက်တစ်ခွက် ထဲမှာ ရှားစောင်းလက် […]
ရှေးလူကြီးများ မှတ်သားခဲ့ကြသော… မိုးရွာမည်ကို ကြိုသိသောသူ (၈) မျိုး
ရှေးလူကြီးများ မှတ်သားခဲ့ကြသော… မိုးရွာမည်ကို ကြိုသိသောသူ (၈) မျိုး ရှေး အ ခါက တောင်သူ ကီးများသည် မိုးရွာ မည်ကို သိသောသူ (၈) ပါးကို မှတ်သား ထားကြသည်။ ထိုရှစ်ပါးမှာ… “စောင်း ဆရာနှင့် ယားနာ၊ ပွေးကွက်၊ ပါဒရက်က၊ ပုရွက်၊ ပလူ၊ အနူ ၊ပြဒါး ပေါင်းရှစ်ပါး မိုးရွာ မည်ကို ကြို သိသူ” ဟု မှတ်သား ခဲ့ကြ သည်။ ၁။ စောင်းဆရာ ‌ စောင်း ဆ ရာသည် မိမိ စောင်းကြိုးများ တင်းနေသည်ကို တွေ့၍ မိုးရွာတော့ မည် ဟု ကြို သိလေသည်။ မိုး ရွာတော့မည့် အခါ […]
ကံထူးပြီးထီးပေါက်ခဲ့သော်လည်း အသုံးအဖြုန်းကြီးသောကြောင့် see more
ကံထူးပြီးထီးပေါက်ခဲ့သော်လည်း အသုံးအဖြုန်းကြီးသောကြောင့် see more ကံထူးပြီး ထီးပေါက် ခဲ့သော်လည်း အသုံး အဖြုန်းကြီးသောကြောင့် စားစရာ မရှိအောင် ဆင်းရဲ သွား ခဲ့ပြီး နေစရာပင် မရှိတော့ သည့် အမျိုးသားလောကကြီး ထဲတွင် လူဖြစ် လာပြီ ဆိုပါက ပင်ပန်းဆင်း ရဲလှသော အခက် အခဲတွေကို ကြုံတွေ့ရတာ သဘာဝပင်ဖြစ် ပါတယ် ။သို့သော် လည်း အချို့ဆင်းရဲ ခက်ခဲမှုတွေ ဟာ သာမန် ထက်ပိုနေ ခဲ့ပြီး ရှုန်းကန် လှုပ်ရှားနေကြ ရတာဖြစ် ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့်လည်း ဆင်းရဲ မှုတွေကနေ အမြန်ဆုံး ရုန်းထွက်ပြီး လောက စည်းစိမ်ကို တဝကြီးခံစား ချင်ကြတာဟာ အခြေခံ လူတန်းစား တို့ ၏ […]